MYUTSAWMYIT : တိုင်းရင်းသားသတင်း: October 2013
ပလောင် (တအာင်း) ဒေသ၌ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ တိုးလာ နေခြင်း
ပြည်တွင်း ထဲတွင် တိုက်ပွဲ ခဏခဏ ဖြစ်လာသည့် အတွက် ပြည်တွင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ ဖြစ်လာ ပေသည်။ အစိုးရတပ် များသည် ပလောင် ဒေသ ဖြစ်သည့် နမ်းဆန်၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်မတူ၊ တန့်ယန်း၊ နမ့်ခမ်း နှင့် မန်တုန် မြို့နယ် တလျှောက်၌ ထိုးစစ်ဆင်လျှက် ရှိပါသည်။
ဒေသ စိုးမိုးရေး၊ လုံခြုံရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဖိအားပေးရေး စသည့် အကြောင်း အမျိုးမျိုး ပြကာ စစ်ဆင်နေပြီး ဒေသခံများအား အဓမ္မ စွပ်စွဲကာ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ပေါ်တာခေါ်ခြင်း၊ အကြောင်းမဲ့ ပစ်သတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်း တိုက်ပွဲဖေါ်ခြင်း၊ ရွာအပြင် မထွက်စေခြင်း စသဖြင့် ဒေသခံ လူထုအား ကြောက်လန့် နေစေရန် ဖန်တီး နေခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ကြောက်လန့် တကြား စိုးရိမ်နေရသော လူထုများသည် နီးစပ်ရာမြို့ သို့ လည်းကောင်း၊ တောထဲတွင် လှည့်လည် သွားလာ နေရခြင်း (IDP)၊ စစ်ထဲ မ၀င်မဖြစ် ၀င်ခဲ့ရခြင်းများ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါသည်။ အလုပ် လက်မဲ့များ ဖြစ်လာခြင်း၊ မူးရစ်ဆေးဝါး ပြသနာ ထူပြောလာခြင်း၊ အကျင့်ပျက်မှုများ နှင့်ကျေးရွာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ကြောင့် ဒုက္ခသည် ဘ၀များ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:16 PM No comments:
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း အစိုးရ နှင့် တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲတနာရီခန့်ဖြစ် ပွားကာ နှစ်ဘက်ဆုံးရှုံးမှုရှိကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် ၂၀၁၃ ခု မွန်းတည့်ချိန် တွင် ဟိုပန်မြို့အခြေစိုက် အစိုးရတပ်ရင်း ခလရ ၁၄၃ အင်အား ၆၀ ကျော် က မိုင်းယုမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ တအာင်း( TNLA ပလောင်) နှင့် သျှမ်း (SSPP/SSA) တို့ ပူးပေါင်းတပ်အား တနာရီကျော် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 3:59 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသား အားလုံးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိရန် အခြား တိုင်းရင်းသား များနှင့် ရှေ့ဆက် လက်တွဲသွားလိုကြောင်း ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU)၏ ကရင်အမျိုးသား လွတ် မြောက်ရေး တပ်မတော်(KNLA)မှ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘောကျော်ဟဲက ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုက် သည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO)၏ လိုင်ဇာဌာနချုပ်ရှိ ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများညီလာခံ စတင်ကျင်းပနေချိန်၌ KNLA ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘောကျော်ဟဲက လက်ရှိ၎င်းနေထိုင်ရာ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ဒေသ KNU တပ်မဟာ(၅)တွင် ယခုလို ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်တပ်တို့၏ အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်နေ မှုကြောင့် အောက် တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ တစ်ရက် တည်း တအာင်း လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲ သုံးကြိမ်ဆက် တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဟုသိရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:50 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားအရေး ပြောကြားပေး လိုဟု BNI ပြောဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောသင့်ပြောထိုက် သည်များကို ပြောကြားရန် လိုကြောင်း နိုင်ငံတကာမြန်မာ့သတင်း- BNI ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ကဆုမွန်က ပြောကြားလိုက် သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၈ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ Myanmar Media Library ၌ BNI ၏ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်း ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က “ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခစစ်ပွဲများဆိုင်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေး အခြေအနေ” အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက် သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ လာရောက်သတင်းယူသူ ဒီလှိုင်းစာစောင်မှ သတင်းထောက်တစ်ဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် မည်သို့သဘောထားရှိကြောင်း မေးမြန်းမှုကို တုန့်ပြန်ဖြေကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:42 PM No comments:
ပြည်သူ့စစ်နှင့်အစိုးရတပ် ပူးပေါင်းအင်အားအချို့က ထိုင်း - သျှမ်း နယ်စပ်ရှိ သျှမ်းတပ်စခန်းနှင့်
၀ တပ်စခန်းအား ၇၉ မမဖြင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း တပ်မှူးတဦးက ပြောပါသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် ညနေ ၅ နာရီခွဲခန့်က ဟိုမိန်းမြို့ အခြေစိုက် စစ်ဗျူဟာ လက်အောက်ခံ
တပ် ရင်း ၂၈၇ ဗိုလ်မှူး ဝင်းဇော်လင်း ဦးဆောင် အင်အား ၃၀၊ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ အင်အား ၂၀
ပူးပေါင်း တပ်တို့က ဟိုဟ တောင်ကြော ရှိ သျှမ်း RCSS/SSA ၊ ဝ တပ် WNA တို့၏ တပ်စခန်း
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များ ဖော်ထုတ်ရန် KNU အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော် မရှင်ဖွဲ့စည်း
မြန်မာပြည်အတွင်း အောက်တိုဘာလလယ်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများမှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ဟု အစိုးရဘက်မှ ပြောဆိုခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်းများနောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့ဝင် ၇ဦး ပါဝင်သော အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်နေ့က KNU ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
ထိုနေ့က KNU ဖားအံခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၇)ဌာနချုပ်တွင် KNU ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ၊ အမြဲတမ်းကော်မတီဝင် များ၊ ခရိုင်အသီးသီးမှ ဥက္ကဌများ၊ တပ်မဟာအသီးသီးမှ တပ်မဟာမှူးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင် စုစုပေါင်း ၃၀ဦးကျော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU က ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:41 PM No comments:
အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များ
မိမိဌာနချုပ်များမှ လိုင်ဇာမြို့သို့ စတင်ထွက်ခွာနေကြောင်း နီးစပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များက ပြောပါသည်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (KIO/KIA) ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့သို့ အပစ်ရပ်
ထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြသည့် RCSS/SSA
ခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းလ၊ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းငင်း၊
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းမိဏ်း၊ SSPP/SSA မှ စဝ်ခွန်ဆိုင်၊ စဝ်ကျော်လ၊ ဗိုလ်မှူး
ဘထွန်း၊ကေအဲန်ယူမှ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးဆေးဖိုး၊ ဗဒိုကွယ်ထူးဝင်း၊ ဗဒိုထူးထူး
လေး တို့က ညီလာခံတက်ရောက်ရန် ထွက်ခွါသွားကြခြင်းဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့အထိကျင်းပမည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်း ဆောင်များ၏ ‘လိုင်ဇာညီလာခံ’ သို့ ဝ နှင့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ တက်ရောက်မည်မဟုတ်ဟု နီးစပ်သည့် အသိုင်း အဝိုင်းက ပြောပါသည်။
အပစ်ရပ်ထားသည့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ နှင့် ၀ တပ်ဖွဲ့တို့သည် လက်ရှိကျင်းပမည့် လိုင်ဇာညီလာခံအားတက်ရောက် မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ တက်ဖို့လည်းမလိုအပ်ကြောင်း၊ သို့သော်တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်ပွဲတွင် မြန်မာအစိုးရဖိတ်ကြားပါက တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအမည်မဖေါ်လိုသူ မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ အရာရှိ ကပြော သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:40 PM No comments:
မြန်မာစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက ပြဿနာများ ဖြစ်သော လူမျိုးအုပ်စုများအကြား ပြဿနာများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဈေးကွက် လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားမှုတို့ကို ယနေ့တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပဋိပက္ခစစ်ပွဲများဆိုင်ရာ မြန်မာစီးပွားရေး အခြေအနေ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (MPM) နှင့် နိုင်ငံတကာ မြန်မာ့သတင်း (BNI) တို့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်သည့်
ယင်းအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ Myanmar Media Library တွင် ကျင်းပသည်။
ဗုံးပေါက် ကွဲမှုများ KNU ညွှန်ကြားချက် မဟုတ်ဟု ဗဒို မန်းငြိမ်းမောင်ဆို
ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည် ကြီးများ ဟိုတယ်နှင့် မန္တလေး၊ ပဲခူး တို့၌ ယခု အောက်တိုဘာ လအတွင်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု များသည် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက် မဟုတ်ကြောင်း ဗဟို အမြဲတမ်း ကော်မီတီ ဗဒို မန်းငြိမ်းမောင်မှ ကရင် အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ် ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်ရာ လူထု တွေ့ဆုံ ပွဲတွင် ရှင်းလင်း ခဲ့ကြောင်း ၄င်း တွေ့ဆုံ ပွဲကို တက်ရောက် ခဲ့သူ တစ်ဦးမှ ပြောသည်။
“အဲဒီ ဆွေးနွေး ပွဲမှာ တက်ရောက် လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တဦးက မေးလိုက် တာပါ။ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး ဗုံးဖောက် ခွဲမှုမှာ KNU ပြုလုပ်တာ ဟုတ်မဟုတ် အမေး ကိုတော့ ပဒိုမန်းငြိမ်း မောင်က အဲဒီ ကိစ္စ KNU ညွှန်ကြားတာ မဟုတ်ဘူး။ အစိုးရ ကတော့ ဖမ်းမိ တာတော့ ရှိတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ လုပ်သလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ သတင်း အတိအကျ မရ သေးဘူးလို့ ရှင်းပြ သွားခဲ့တယ် ” ဟု ကရင် နယ်ခြား စောင့်တပ် (BGF) ဗဟို ကွပ်ကဲ ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဌာနမှ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စောတင်ဝင်းက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် KNPP တို့ တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ်ပျက်
နှစ်ဖက်တပ်များအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန်အတွက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP) အဖွဲ့တို့ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မအားလပ်သဖြင့် တွေ့ဆုံရန် အစီအစဉ် ပျက်သွားကြောင်း KNPP အတွင်းရေးမှူး ဦးရွှေမျိုးသန့်က ပြောကြားသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံရန် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ တွင် KNPP စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဘီတူး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း တွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:26 PM No comments:
''ကယန်းဆိုတာ 'ကန်'နဲ့ 'ယန်း'နဲ့ ပေါင်း စပ်ထားတာ။ 'ကန်'ဆိုတာ ပိုင်နက်နယ်မြေ၊ 'ယန်း'ဆိုတာ လူမျိုး။ပိုင်နက်နယ်မြေရှိတဲ့လူမျိုး''
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:25 PM No comments:
နမ့်စန်မြို့မှာ ပြည်သူ့စစ်နဲ့ ရွာသားတွေ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း နမ့်စန်မြို့မှာ မနေ့က မတ်ကျန်းပြည်သူ့စစ်ဌာနေက တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး မောင်းနှင်လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထော်လာဂျီတစ်စီး တိုက်မိကြပြီး ထော်လာဂျီမောင်းသမားကို မတ်ကျန်းတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦး လောက်က ဝိုင်းရိုက်တာကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် နမ့်စန်မြို့သူ မြို့သားတွေအနေနဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတယ်လို့ မြို့ခံတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
KNPP နှင့် အစိုးရတို့ တတိယ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ ဆုံးဖြတ်ချက် (၇) ချက် ချမှတ်
ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့ ပြည်နယ် ခန်းမတွင် နှစ်ရက်တာ ကျင်းပ ခဲ့သော ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP) ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ကိုယ်စားလှယ် များ၏ တတိယ အကြိမ် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေး ပွဲသည် ရလာဒ် တစုံတရာ မရှိဘဲ ယမာန် နေ့က ပြီးဆုံး သွားသည်ဟု KNPP ၏ ဆွေးနွေးပွဲ ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ခူဦးရယ် က ဆိုပါသည်။
“ဖြစ်ထွန်းမှု အသစ်တွေ မရှိပါဘူး။ အဟောင်း ထဲမှာ သံသရာ လည်နေ သလိုပါဘဲ။ ကျနော် တို့က ဒုတိယ အကြိမ် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေး ပွဲရဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်တွေကို ဘယ်လို အကောင် အထည် ဖေါ်ကြ မလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာ ဟောင်းကို ထပ်ကာ တလဲလဲ ဆွေးနွေး နေကြတာပါ။ ထူးခြား တာတော့ မရှိဘူး”ဟု ဆိုပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:25 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:43 AM No comments:
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ အသစ်ရေးဆွဲရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောထားအမြင်များကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် လိုက်လံကောက်ယူရာ ရှမ်းမြောက်ပိုင်းခရိုင် သုံးခုတွင် ပြင်ဆင်ရန် အတွက် သဘောတူကြောင်း သဘောထားအမြင်များကို ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လိုက်လံကောက်ခံသူ NLD ၏ ဗဟို အလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးထွန်းထွန်းဟိန်က အောက်တိုဘာ၂၂တွင် ပြောသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများကို ရှင်းလင်းပေးခြင်း၊ သဘောထားအမြင် ကောက်ခံခြင်းများကို NLD က အောက်တိုဘာ ဒုတိယအပတ်အတွင်းတွင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင် စတင်ကောက်ခံခဲ့ရာ လက်ရှိ
ကောက်ခံရသည့် အခြေအနေမှာ ပြင်ဆင်ရန် ရာခိုင်နှုန်း ပိုများနေသည်ဟုလည်း NLD မှ သိရသည်။
နမ့်ခမ်းမြို့ ဗုံးကွဲမှု အစိုးရတပ် တာဝန်မကင်းဟု လူထုဝေဖန်
အစိုးရတပ် အခြေချ တည်းခိုနေသည့် မြို့လယ်ကျောင်းတိုက်တွင် စစ်ကြောင်းအတွက်လုံခြုံရေး
ကင်းချထားပါလျက်နှင့် ဗုံးဖောက်ခွဲခံရသည့်အပေါ် နားမလည်ဖြစ်ရကြောင်း ဒေသခံ လူထုက
ဗုံးပေါက်ကွဲသည့် (၁၆၊ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ) ည တွင် အစိုးရတပ်စစ်
ကြောင်း လူအင်အား ၄၀ ခန့်ကနမ့်ခမ်း မြို့လယ်ကျောင်း၌
အခြေချကာ လုံခြုံရေးကင်းများ ကျောင်းတော်ပရဝုဏ်ပတ်
လည်၌ ချထားကြောင်း၊ အဆိုပါစစ်ကြောင်းသည် ၁၅ ရက်
နေ့ ကတည်းက ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ဗုံးပေါက်ကွဲချိန်တွင်
လည်း အချိန်မှီသွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်းမရှိကြောင်း၊ ဗုံးပေါက် ကွဲရာနေရာအနီး
စစ်ကြောင်းမှာ တာဝန်မကင်းကြောင်းအမည် မဖေါ်လိုသည့်
KNPP နှင့် အစိုးရ တို့၏ တတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ
ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP) နှင့် အစိုးရ တို့၏ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီ တို့၏ တတိယ အကြိမ် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေး ပွဲကို ကယားပြည်နယ် ပြည်နယ် ခန်းမတွင် ယနေ့ မနက်(၁၀) နာရီတွင် စတင် ဆွေးနွေး ခဲ့ရာ ညနေ အချိန်ထိ ဆုံးဖြတ်ချက် တစုံတရာ မချနိုင် သေးကြောင်း KNPP ဆွေးနွေးပွဲ ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ခူဦးရယ်က ဆိုပါသည်။
“ ဒီနေ့တော့ မပြီး နိုင်ဘူး။ နက်ဖြန်ကျရင် တပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စနဲ့ တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးမယ့် ကိစ္စ အပေါ် KNPP ရဲ့ သဘော ထားကို ဆွေးနွေး ကြမှာပါ။ ဒီနေ့ မှာတော့ ကိစ္စ အတော် များများကို ဆွေးနွေး ခဲ့ပေမယ့် ဘာမှ မဆုံးဖြတ် နိုင်ကြဘူး” ဟုဆိုပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:04 PM No comments:
အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်မှ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို နှောင့်ယှက်
ဖျက်ဆီးလိုသည့် သဘောဖြင့် ပြုလုပ်သည်ဟု အစိုးရဘက်က ပြောဆိုထားသော်လည်း ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး
ပဋိပက္ခများ ကြီးထွားအောင်လုပ်ဆောင်သည်ဟု KNU (ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး)က သုံးသပ် ပြောဆိုလိုက်
ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ရှစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းမိထားပြီဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ၀န်ခံထွက်ဆိုမှုအပေါ် အစိုးရနှင့် KNU တို့၏ ရှင်းလင်းချက်မှာ အထက်ပါအတိုင်း ကွဲလွဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့ပေါ် ဗုံးခွဲမှုတချို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ သံသယဖြစ်ခံရသူတယောက်ဟာ KNU ရဲ့ ဖာပွန်ဒေသ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖူးကြောင်း သတင်းတချို့ထွက်လာပါတယ်။
ဒီသတင်းထွက်အပြီးမှာ KNU ရဲ့ ဖာပွန်ခရိုင်/တပ်မဟာ ၅ က ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲချိန်အတွင်း နယ်မြေပိုင်းခြား သတ်မှတ်ထားသင့်ကြောင်း အစိုးရစစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးခြင်းမှ ပြန် လည်လွတ် မြောက်လာခဲ့သူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ) တောင်ငူခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၂)မှ တပ်သားနှစ်ဦးက ပြောဆိုလိုက် သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်း ယခုလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိခံရသူ ၄ ဦးကို ဖမ်းမိ ထားပြီး တချို့မှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန် ပြောဆိုသည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း KNU ကလည်း မိမိတို့ လက်ချက်မဟုတ်ဟု သဘောထား ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
နိုင်ငံတ၀န်း ပေါက်ကွဲခဲ့သော ဗုံးခွဲမှုများတွင် တောင်ငူ ဗုံးကွဲမှုမှလွဲ၍ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း မြို့များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အားလုံးသည် ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးမှုအရ ဆက်စပ်မှုများရှိနေကြောင်း၊ သံသယရှိခံရမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထား ရသူများတွင် တချို့က KNU နှင့် ပတ်သက်သည်ဟု ၀န်ခံချက်များရှိနေပြီး လွတ်မြောက် နေသူများကိုလည်း ခြေရာခံ လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယရဲမှူးကြီးမင်းအောင် ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသည်။
တိုက်ပွဲများအပြီး ကျေးလက်လူထုအား စစ်ကြောင်းကြားညှပ်၍ တပ်ဆုတ်
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်အတွင်း ယခုလဆန်းပိုင်းက တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွါးပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာ စစ်တပ်က တပ်ဆုတ်ရာတွင် ကျေးလက်လူထုအား စစ်ကြောင်းကြားညှပ်ပြီး ကားလမ်းမ ကြီးအထိ လိုက်ပို့ပေး ဖို့ပြောဆိုတယ်လို့ ကွန်ဟိန်းမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:23 PM No comments:
နိုင်ငံရေး ကစားလိုသော တတိယအင်အားစုတစ်ခု ကဖောက်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးပွဲ များနှင့် နိုင်ငံရေးအပြောင်း အလဲများ ကိုမလိုလားသည့် တတိ ယအင်အားစုတစ်ခုမှ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုမရအောင် လှုံ့ဆော်မှု များနှင့် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးလုပ် ငန်းများ ကို လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု ယူဆကြောင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့ လာသူများ၊ တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများက ပြော ကြားလိုက်သည်။
KNU/KNLAမှ ဗိုလ်ကြီး စောမိုးဇက်က''ကျွန်တော်တို့အ ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ ဒီလိုဖောက် ခွဲမှုတွေနဲ့ လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိ ဘူးဆိုတာပြောရဲပါတယ်။ ဒီလုပ် ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် တို့တိုင်းရင်းသားတွေက လုံးဝရှုတ် ချပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ တိုင်းရင်း သားအဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်း ရေးဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်တာ တွေ၊ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကို မလိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေးကစားလိုတဲ့ တတိယအဖွဲ့တစ်ခုလိုမျိုးက ဒီလို အဖျက်လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နေ တယ်လို့ ထင်ပါ တယ်''ဟု ပြော သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:19 PM No comments:
ကရင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ နှစ်သစ်ကူး ကော်မီတီ ဖွဲ့စည်း
လာမည့် ၂၇၅၃ ခုနှစ်အ တွက် ကရင် နှစ်သစ်ကူးနေ့ ကျင်းပရေး ကော်မီတီကို ကရင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း များက မြ၀တီခရိုင် ရွှေကုက္ကိုမြိုင် ကျေးရွာတွင် ယနေ့ စုပေါင်း ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြ သည်ဟု ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ အစိုးရ အမှတ် (၃) နယ်ခြားစောင့် တပ်မှ ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူး မင်းဦးက ဆိုပါသည်။
“ အခု ကျင်းပ တာက ဒုတိယ အကြိမ်ပါ။ ကျင်းပရေး ကော်မီတီ ကိုလည်း ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့တယ်။ သုံးတဲ့ ငွေကြေး ပမာဏ ကိုလည်း ဆုံးဖြတ် နိုင်ခဲ့တယ်။ အဖွဲ့ တော်တော်များ တက်ရောက် ပါတယ်။ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားပါ ကျင်းပ မယ်လို့ ဆုံးဖြတ် ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတည် မပြုနိုင် သေးဘူး” ဟု ဆိုပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:14 PM No comments:
ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP) သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် အစိုးရနှင့် အပစ် အခတ် ရပ်စဲ ခဲ့ပါသည်။ အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး အတွက် ပြည်နယ် အဆင့် သဘော တူညီချက် (၅) ချက်နှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် သဘော တူညီချက် (၁၄) ချက် တို့ဖြင့် စာချုပ် ချုပ်ဆို ခဲ့ပါသည်။
KNPP သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားခြင်း အားဖြင့် နိုင်ငံရေး ပြသနာကို နိုင်ငံရေး အရ ဖြေရှင်း လိုသော စေတနာနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲ ခဲ့သည်မှာ အမှန် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။ သို့သော်လည်း အစိုးရသည် ထိုသဘော တူညီချက် များကို ကြောခိုင်း ခဲ့ခြေပြီ။ တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အတွက် အသစ် လက်မှတ် ထိုးရန် လိုအပ် သည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ လဆန်းတွင် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) အား အသိပေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ နောင်လာမည့် ဆွေးနွေးပွဲ များကိုလည်း UNFC အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ တော့မည် မဟုတ်ဟု မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင် မြို့၌ကျင်းပသော အပစ်ရပ် (၄) ဖွဲ့၏ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ချိန်တွင် ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း က ထုတ်ဖေါ် ပြောကြား ခဲ့ပြန် ပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:24 PM No comments:
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဂေဟာ MPC မှ နည်းပညာ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့် ပလောင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးတို့
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံမှုတွင် အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်၌ နှစ်ဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ
ပြုလုပ်ရန် မူအားဖြင့် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်ဟု MPC ၏ အကြီးတန်း အရာရှိ ဦးလှမောင်ရွှေက ပြောသည်။
“နောက်အစည်းအဝေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အကြိုညှိနှိုင်းတဲ့ သဘောပါပဲ။ လာမယ့် နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံပွဲကို အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်လောက်မှာ လုပ်ဖို့ကိုတော့ အကြမ်းဖျင်း သဘောတူနိုင်ခဲ့ကြတယ်”ဟု ဦးလှ မောင်ရွှေက မဇ္ဈိမကို
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ရပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ပါဝင်ရန် သဘောတူထားသည့် RCSS/SSA နှင့် အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲတွင် ပါဝင်ရန် သဘောတူထားသည့် အဖွဲ့များတွင် တစ်ဖွဲ့အပါအ၀င် ဖြစ်သော ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS/SSA) နှင့် အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် နေရာနှင့် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပွားနေသည် ဆိုသည်ကိုမူ အတိအကျ မသိရသေးကြောင်း RCSS/SSA ၏ တောင်ကြီးမြို့ ဆက်ဆံရေးရုံး ဒုတိယတာဝန်ခံ ဦးစိုင်းမောင်းက ပြောကြားသည်။ ''တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာတွေကတော့ အတိအကျ မသိသေးဘူး'' ဟု ဦးစိုင်းမောင်းက အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ပြောကြားသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:40 AM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:38 AM No comments:
အောက်တိုဘာအတွင်း ပြန်လည်ထုတ်ဝေတော့မည့် ဇင့်တိုင်းစာစောင်တွင် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး သတင်းများအပြင် ဒေသန္တရသတင်းများကို သျှမ်းဘာသာဖြင့် တလနှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေသွားမည်ဟုပြောသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:54 PM No comments:
စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်း ရေးသည် အစိုးရ၏ စေတနာ အပေါ် တွင်သာ မူတည်
၂၀၀၇ ခုနှစ် ကတည်းက စလို့ အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့တဲ့ ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီလို့ လူသိ များတဲ့ KNU/KNLA - PC အဖွဲ့ဟာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး နောက်မှာတော့ စာချုပ်ပါ သဘော တူညီချက် တွေအတိုင်း အစိုးရ ဘက်က လိုက်နာ လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ခြင်း မရှိ ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ပြင်ကို ၄င်းတို့ အဖွဲ့ရဲ့ ထိန်းချုပ် ဒေသ တွေမှာလည်း ၄င်းတို့ရဲ့ အခြေစိုက် စခန်း အနီး အထိကို အစိုးရ တပ်စခန်းတွေ ချလာပြီး စစ်ရေး အင်အား တိုးချဲ့ ချလာ နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ ခရီး သွားလာမှု တွေမှာလည်း ပိတ်ပင် တားဆီး မှုတွေ ရှိနေ တယ်လို့ ဆိုနေ ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနက နေပြီး KNU/KNLA-PC အဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးကြီး တိုက်ဂါး လို့ခေါ်တဲ့ စောအယ်လ်ကော်ထူးကို ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားတာကို တင်ဆက် ပေးလိုက် ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:32 PM No comments:
ရှမ်းတပ်နှင့်အစိုးရ တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်၊ ဒုက္ခသည်များ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
အခုရက်ပိုင်း အတွင်း ရှမ်းပြည် နယ်တောင်ပိုင်း ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် အတွင်းမှာ အစိုးရ တပ်တွေနဲ့ အာရ်စီအက်စ်အက်စ်၊ အက်စ်အက်စ်အေ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တပ်တွေ တိုက်ပွဲ ပြန် လည် ဖြစ်ပွားနေလို့ ဒေသခံရွာသားတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။
မနေ့မနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစပြီး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေလို့ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ပိန်းနေရွာ၊ ၀ိန်းဖီးရွာနဲ့ အနီးအနားက ဒေသခံရွာသားတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါ။
သျှမ်းပြည်တောင် ပိုင်းကွန်ဟိန်းမြို့နယ် အတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် သျှမ်းပြည် တပ်မတော် RCSS/SSA တို့ ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဆင်နွဲနေသောကြောင့် ဒေ သခံ ရွာသူရွာသား ရာဂဏန်းက စစ်ဘေး တိမ်းရှောင်နေ ရသည်ဟု ဒေသခံ များက ပြောပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:56 PM No comments:
ကရင် ပြည်နယ် အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းချက် အရ လာမည့် စာသင် နှစ်တွင် အစိုးရ စာသင် ကျောင်း၌ ကရင်စာ သင်ကြား နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သော ကရင်စာ တတ်သည့် ကျောင်းဆရာများ ရရှိရေး ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင့် အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) ဌာနချုပ် ဖြစ်သည့် မြ၀တီ ခရိုင် ဆုံဆည်းမြိုင် ကျေးရွာတွင် ကျင်းပရာ ယနေ့ပြီးဆုံး သွားခဲ့ကြောင်း ပြောခွင့် ရသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် မိုရှေးက ဆိုပါသည်။
“ကရင်စာ တတ်တဲ့ ဆရာ ဆရာမ တွေကို ရှာခိုင်း တာပါ။ ပထမ နှစ်မှာ သူငယ်တန်း ကနေ စသင်မယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးသွားတဲ့ သဘောပေါ့။ အစိုးရက လစာ ပေးမယ်။ ပိုးကရင် များတဲ့ နေရာမှာ ပိုးကရင် စာသင် မှာပေါ့၊ စကော ကရင် များရင် စကော ကရင်စာ သင်မှာပေါ့။ တပြည်နယ်လုံး သင်ကြမယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
လနှင့်ချီကာ ရွာအတွင်း အစိုးရတပ် အခြေချလှုပ်ရှား ဒေသခံများစိတ်သောကရောက်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်း၌ သျှမ်းတပ်ဖွဲ့ လှုပ်ရှားသည်ဟု ဆိုကာ မြန်မာစစ်ကြောင်း က ရွာထဲစခန်းချ ရွာသားများ၏ ခြံထွက်ပစ္စည်များ ထင်းများ ယူငင်သုံးစွဲ ကာ နေ့စဉ်တောနင်း လိုက်ရှာနေသဖြင့် ရွာသားများ စားဝတ် နေရေးအတွက်ထိခိုက်ရကြောင်း ဒေသတွင်းသတင်းရပ် ကွက်ကဆိုပါ သည်။
စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းကတည်းက သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ်ဘက် အစိုးရတပ် ခလယ ၆၈၊ ခမယ ၃၂၄၊ ၅၀၃၊ ၅၀၄ နှင့် ၇၀၁ တပ်များ ကျေးရွာအတွင်း ဝင်ရောက်စခန်းချကာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တောတွင်းသို့ သျှမ်းစစ်သား များအား လိုက်ရှာကြောင်း၊ ရွာအတွင်း လချီ၍နေထိုင်သဖြင့် ရွာသားများ အခက်တွေ့ရကြောင်း မိုင်းယင်ဒေသခံ စိုင်းဆိုင်က ပြောပါသည်။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) ထိန်းချုပ် နယ်မြေ အတွင်း မြန်မာအစိုးရ၏ တပ်နေရာပြောင်းရွှေ့ရေး ကိစ္စ အကောင် အထည် ဖော်သွားရန် ယခုအောက်တို ဘာလ ၂၈ရက်နေ့ တွင် KNU နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရန် ယမန်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့တွင် နှစ်ဖက် အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသား တို့ရဲ့ ဟော်နန်း နေ၀င်ချိန် ပုံရိပ်များ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း လက်စ ဖြောင့်လိုက်တဲ့ ရှမ်းတို့ရဲ့ ပဒေသရာဇ် နန်းတော်... ဧရာဝတီသတင်းဌာနက တင်ပြထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့က ဗမာ ဘုရင်ကို စစ်ရှုံးလို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလာကတ္တားမြို့မှာ တခန်းတနား နဲ့ နေရာချပေးထားတယ်။ ပြန်လာလို့ ရပေမယ့် သူတို့ အမျိုးတွေ တစ်ယောက်မှ ပြန်လာတာ မကြားသေးပါ။ စည်းစိမ်ယစ်မှူးနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့သမိုင်း၊ တီဗီ တွေမှာတော့ လွမ်းခန်း ဆွေးခန်းတွေနဲ့ ဖွဲ့နွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။
ရှမ်းစော်ဘွား တွေ စစ်ရှုံးတာ မဟုတ်... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အတွက် လက်မှတ်ထိုးခဲ့သူများ အဖမ်းခံရတယ်... အသေသတ်ခြင်းခံရတယ်။ သူတို့ရဲ့ နန်းတော်တွေ တခုမှ ရစရာ မရှိ။ စုတ်ပြတ်သပ်အောင် လုပ်ထားတယ်။ သမိုင်းမှာ တခါမှ မလွမ်းသေးပါ။
အစိုးရတပ်နှင့် RCSS ဟိုမိန်းမြို့နယ်ခွဲအတွင်း ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လင်းခေးခရိုင် ဟိုမိန်းမြို့နယ်ခွဲအတွင်း အခြေစိုက် လှုပ်ရှားသည့် အစိုးရ တပ် စစ်ကြောင်းတကြောင်း နှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တို့ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဒေသ အတွင်းသတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၆ ရက် ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က သျှမ်းပြည်တပ်မတော် အမှတ် ၆ စစ်ဒေသ လက် အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့က ဟိုမိန်းမြို့နယ်ခွဲ မယ့်အောလုံရွာ အနောက်တောင်ဘက် တောလှည့်စဉ် အစိုးရတပ် ခလရ ၂၈၇ ဗိုလ်ကြီးကျော်သူရ ဦးဆောင်သည့် စစ်ကြောင်းနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:04 PM No comments:
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နှင့် သျှမ်းပြည်တို့မှ သျှမ်းတောင်သူလယ်သမား ၁၇၀ ကျော်က သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုးနဲ မြို့၌ တွေ့ ဆုံကြကာ မြေယာ သိမ်းပိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အတွေ့ အကြုံများဖလှယ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ကရင် အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲ အသံများ
ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ဦးဆောင်သော ကရင် အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲ တရပ် ကို ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ မြို့နယ်ရှိ (KNU) ထိန်းချုပ် နယ်မြေ တပ်မဟာ (၇) ဧရိယာ သေ့ပေ့ထ စခန်းတွင် အောက်တို ဘာလ (၅) ရက်နေ့က ကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်း ပွဲကို တက်ရောက် ခဲ့သည့် KNU ဗဟို ကော်မတီဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သူပဒို စောသမိန်ထွန်းက ဆိုပါသည်။
“ စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ် (၁၇၀) ဦးလောက် တက်တယ်။ အထူး သဖြင့် အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေ၊ တခြား တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ လောလောဆယ် ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ ပြသနာ တွေကို ရှင်းပြတဲ့ပွဲ ပါဘဲ” ဟု ဆိုပါသည်။
မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် သည် တောင်ငူခရိုင်၊ သံတောင်မြို့ နယ်တွင် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၏ တပ်သား ၂ဦးကို အောက်တို ဘာ ၁ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားရာ ယခု အချိန် ထိ ပြန်မ လွှတ်သေးကြောင်း KNU တောင်ငူ ခရိုင်မှ တာဝန်ရှိ သူများ က ပြောသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:02 PM No comments:
ကရင့် အမျိုးသား တော်လှန်ရေး အကွေ့ အလှည့် ထဲမှ သမိုင်းကြောင်းများ
ကရင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီ (KNU/ KNLA-PC) သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ လတွင် KNU မှ ခွဲထွက် ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတို့ ခွဲထွက် လာပြီး နောက်ပိုင်း အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲ ခဲ့ပါသည်။
၄င်းတို့ ဘာကြောင့် KNU မှ ခွဲထွက် ခဲ့ရ တာလဲ ? ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော ထားနှင့် ကရင့် အမျိုးသား ရင်ကြား စေ့ရေး အတွက် ဘယ်လို သဘော ထားပြီး ဘာတွေ ဆောင်ရွက် နေတာလဲ ? စသည် များအား သိရှိ နိုင်ရန် ကရင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီမှ ဗိုလ်မှူးချုပ် လည်းဖြစ် ဒေါက်တာ တဦးလည်း ဖြစ်သူ တီမိုသေ (Timothy) အား ဆက် သွယ် မေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။
သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ရှမ်းတပ်မတော်(RCSS/SSA) ၏ အရေးပေါ် ဗဟိုကော်မတီ
အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာလ(၁) ရက်က ၎င်းတို့ဌာနချုပ်ရှိရာ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွယ်တိုင်းလျန်ဒေသတွင်
ပြုလုပ်ပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် အစီအစဉ်များကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် အစိုးရနှင့် RCSSတို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုရရှိပြီး နှစ်နှစ်တာ ကာလ
အတွင်း အခြေအနေများကို အဓိက သုံးသပ်ထားပြီး RCSS ၏ ငြိမ်းချမ်းအရေးအတွက် ဆက်လက်အကောင်အထည်
ဖော်မည့် အစီအစဉ်တစ်ချို့ ပါဝင်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 5:42 PM No comments:
အစိုးရ နှင့် အပစ်ရပ်ကာလ ၂ နှစ်ခရီး RCSS ပြန်လည်သုံးသပ်
သျှမ်းပြည် တပ်မတော် RCSS/ SSA နှင့် အစိုးရ တို့ အပစ်ရပ် သက်တမ်း ၂ နှစ်နီးပါး ကာလအတွင်း တိုက် ပွဲပေါင်း ၁၃၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် တိုက်ပွဲလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် RCSS/SSA ဘက်မှအပစ်ရပ် ခရီးပြန်လည် သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၁ အစိုးရနှင့်ပဏာမအဆင့် အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့် နောက်ပိုင်းအစိုးရတပ်က သ ဘောတူညီချက် မလိုက်နာဘဲ ဆင်နွဲခဲ့သည့် တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၂၂ ကြိမ် ရှိ ကြောင်း၊ တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် RCSS/SSA ဘက်မှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည့် တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၁ ကြိမ် ရှိကြောင်း - စသည့်အချက်များပါ အပစ်ရပ်ခရီးပြန်လည်သုံးသပ်သည့် အစီရင်ခံစာ တစောင် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
TNLA တအန်းတပ်(၂၅၆) နှင့် မြန်မာတပ် (ခမရ- ၅၀၆) ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာတပ်ဖွဲ့ ၂ ဦး ကျဆုံး
၃ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၃ ခုနှစ်။
နမ့်ဆန်မြို့နယ် ဘန်လူမ် ရွာအနီး တောတန်းတွင် တအန်းတပ်မတော် တပ်ရင်း ၂၅၆ နှင့် မြန်မာ တပ်မတော် ခမရ ၅၀၆ စစ်ကြောင်းတို့ ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက် နံနက် ၀၅း၃၀ နာရီခန့်မှ ၀၆း၀၀ နာရီခန့်အထိ နာရီဝက်ကျော်ကြာ နှစ်ဘက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ မြန်မာတပ်မှ အနဲဆုံး ၂ ဦးကျဆုံး
တပ်ရင်း ၂၅၆ သည် မိမိတပ်ရင်းနယ်မြေ တောတောင်တွင် ပြောက်ကျားအခြေချ လှုပ်ရှားရင်း မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး၊ လူထုစည်းရုံးရေးနှင့် နယ်မြေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ အစိုးရတပ်နှင့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:53 PM No comments:
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံ ရေးဆွဲသွားရန် မွန်ညီလာခံ ဆုံးဖြတ်
တိုင်းရင်းသားများ၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အာမခံသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲပြဌာန်းသွားရန် စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်မှ ၃၀ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် မွန်အမျိုးသားညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မင်းကြည်ဝင်းက ပြောသည်။
ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းက “ကွန်ဖရင့်ကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ သုံးရက်ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဒီဆွေးနွေး ထားတဲ့အချက်တွေကို အခြေခံပြီးတော့ နောက်ဆုံးရလဒ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ကွန်ဖရင့်(ညီလာခံ)ကနေပြီးတော့ အချက် ၅ချက် ကို သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။”ဟု ပြောသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 3:53 PM No comments:
သျှမ်း/မြောက်တွင် လူဦးရေကောက်ယူရေးကော်မတီဖွဲ့စည်း - လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်
သျှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီနှင့် သျှမ်းလူမှု အဖွဲ့အစည်း စုပေါင်းပြီး သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လူဦးရေကောက်ယူရေး ကော်မတီကို လားရှိုးမြို့ တွင် ဖွဲ့စည်းကာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တာဝန်များခွဲဝေ ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၈ နှင့် ၂၉ ရက်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး ခေါင်းစဉ် ၄ ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ ဒေသတွင်းလူငယ်ထုများ စုစုပေါင်း ၃၁ ယောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဆွေးနွေး ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သည့် လဲချားမြို့နယ် ကျားဖြူပါတီ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် စိုင်းကျော်ဇေယျကပြောသည်။
စီးပွားရေး မဖွံ့ဖြိုးမှု ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဆက်စပ်...
မြန်ပြည်တခွင်က သျှမ်းတောင်သူများ မိုးနဲမြို့၌တွေ့ဆ...